Barnaamijyada lagu muujiyo, lagu rinjiyeeyo laguna sawiro dijitaalka | Abuurista khadka tooska ah
Barnaamijyo lagu muujiyo, lagu rinjiyeeyo oo lagu sawiro dijitaal
Marka la eego hubaal la’aanta markay tahay isticmaal barnaamijyada qaarkood sawirro iyo waxyaabo kale naqshad sawireed, Waa wax iska caadi ah naqshadeeyayaasha iyo hal abuureyaashu inay ku soo duulaan shakiga ku saabsan software-ka ugu fiican ee la sameeyo, imisa barnaamijyo ayaa jira, kuwaas oo ah kuwa ugu badan ee la isticmaalo.
Xaaladdan oo kale, waxaan kugula socodsiin doonnaa maqaalkan, kuwaas oo ah barnaamijyada ugu isticmaalka badan sawirradan waxay u shaqeeyaan, sawirro iyo sawirro.
1 Inta badan barnaamijyada loo isticmaalo sawirada dhijitaalka ah
1.2 Qalabka Rinjiga Fudud SAI
1.3 Rinjiile, rinjiyeyn dijitaal ah oo saafi ah
1.5 Rinjiga Studio Cilp
1.6 ArtRage, sida shiraac dhab ah
1.7 Buug-gacmeedka Pro
2 Maxay yihiin barnaamijyada ugu habboon ee sawir, sawir iyo rinjiyeyn?
Inta badan barnaamijyada loo isticmaalo sawirada dhijitaalka ah
Shaki la'aan, kan ugu fiican uguna qaddarinta badan marka ay timaado sameynta sawirro maxaa yeelay way dhammaystiran tahay, waa la door bidaa markay tahay tafatir sawirada dhijitaalka ah, wuxuu kaloo u shaqeeyaa sida shiraac rinjiyeyn ah, wuxuu kuu oggolaanayaa inaad sameysato mid kuu gaar ah burush, kaydintooda, waxay fududeeysaa palette ballaaran oo midabyo iyo qaabab kala duwan ah.
Haddii aad ka sameysato nolol xirfad leh sawirrada, softiweerkan awoodda badan ayaa mudan in wax la barto lana adeegsado, kaas oo aad ku sameyn karto wax kasta oo aad rabto. Dabcan maahan bilaash.
Qalabka Rinjiga Fudud SAI
Waxay ka kooban tahay is-dhexgal aad u fudud oo fudud oo fududeeya barashadiisa iyo isticmaalkeeda dambe. Software wuxuu xooga saarayaa aagga sawirka iyo rinjiyeynta, waxay taageertaa qaabeynta burushka, wax ka beddelka qaababkooda iyo qaababkooda, cabirka iyo cufnaanta dariiqa, waxay taageertaa isku darka midabka, ku darista qaababka midabada waana macquul in la beddelo booska meeraha iyadoo lagu shaqeynayo hal shaqo.
Jillaabtiisu waa xasiliyaha khadka taas oo aad ku gaari doontid qaab-dhismeed dhammaystiran isku dayga ugu horreeya. Liisanka ayaa leh qiimahiisa, laakiin waa u qalantaa.
Rinjiile, rinjiyeyn dijitaal ah oo saafi ah
Qaabkiisa ayaa tilmaamaya rinjiyeynta dhijitaalka ah si sax ah, dhammaystirka rinjiga ayaa si dhammaystiran ugu dayaya kuwa rinjiga acrylic ama biyo-biyoodyada ka shaqeeyay shiraaca, iyagoo awood u leh inay ku daraan lakabyo midab-biyood leh ama khad dareere ah si loo kordhiyo xaqiiqada.
Waxay u baahan tahay kombuyuutar leh awood badan oo si sax ah ugu shaqeeya, iyada oo ah a Barnaamijka qiimihiisu yahay sida ay waxtar u leedahay.
Barnaamijkan waxaa si weyn loogu isticmaalaa samee astaamo, astaans, iwm, iyadoo la siinayo awoodeeda inay sameyso sawir gacmeedyada vector, hase yeeshe, waxay aad ugu shaqeysaa noocyada kale ee sawirada iyo taabasho aad u gaar ah.
Waxay iftiiminayaan qalinka inuu ka mid yahay qalabka aasaasiga ah iyo sida hoos u dhaca loo gaaro. Waxaa iska leh Adobe Waxaana loo iibsan karaa xirmo ama kaligood, oo leh qorshooyin sanadle ah ama hal bil uun la isku dayo.
Rinjiga Studio Cilp
Ku habboon kuwa jecel iyo abuurayasha majaajilada iyo manga. ka software Waxay ka kooban tahay aaladaha lagama maarmaanka u ah abuurista vignettes-ka si loo dhadhamiyo, loo arko aragtida iyo taliyeyaasha sawir qaadista ee ku dayashada dhaqdhaqaaqa, xawaaraha, iwm., Goobooyin hadal ah oo loogu talagalay meeleynta wada-hadallada, waxay abuuraysaa isbarbardhigyo iyada oo loo marayo hawl gaar ah tan, iyada oo ah qiime lagu daray Waxay leedahay maktabad ka kooban 3D ayaa kuu oggolaaneysa inaad wax ka beddel ku sameyso muuqaalka majaajillada.
Qiimaheedu wuxuu ka dhigayaa shaqadiisa.
ArtRage, sida shiraac dhab ah
U shaqeeyaa samee sawirro dhijitaal ah sida shiraac dhab ah, ayey isugu darsantaa waqtiga dhabta ah, saameynta midabbada biyaha, saliidaha iyo acrylics-ka waa la gaaraa, waxay taageertaa qaabeynta burushyada, mid ka mid ah lagu daro shaqo isku eg halka sawirka hal dhinac lagu daro intaad sawireyso.
Ku habboon jaantusyada, sawirrada iyo sawirrada, waxay leedahay dhexdhexaad dhexdhexaad ah oo fudud waxayna leedahay noocyo badan oo burush ah oo la habeyn karo, haddii aysan intaas ku filnayn, waxaad sameyn kartaa animations flipbook.
Waxaa jira a nuqul bilaash ah laakiin la dhimay haddii aad rabto inaad dhammaystirto, waa u qalantaa inaad bixiso.
Waa software fudud oo caqli gal ah, oo ku habboon sameynta sawir gacmeedyo deg deg ah, ma lahan tiro badan oo xulashooyin ah, taas oo faa'iido u leh marka xoogga la saarayo abuurista.
Maxay yihiin barnaamijyada ugu habboon ee sawir, sawir iyo rinjiyeyn?
Soo jeedinta ayaa ah in la isku daro ugu yaraan 2 barnaamij si midkood uu badalo waxa ka kale ka maqan, kuwa ugu fiican sida ay qabaan fikradaha xeel dheerayaasha ahPhotoshop iyo SAI".
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Barnaamijyo lagu muujiyo, lagu rinjiyeeyo oo lagu sawiro dijitaal
Runtii waan jeclahay Krita, ilo furan, oo leh xasiliyaha istaroogga, isku darka iwm.
Ku jawaab Eloi
Tababar Photoshop: Laba-Bilood
Talooyin ku saabsan sawirka jirka bini'aadamka